Lukaku oo saaxiibadiisa uga mahad-celiyay goolkii taariikhiga ee xulkiisa Biljamka. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Lukaku oo saaxiibadiisa uga mahad-celiyay goolkii taariikhiga ee xulkiisa Biljamka.
Lukaku oo saaxiibadiisa uga mahad-celiyay goolkii taariikhiga ee xulkiisa Biljamka.
Posted by: radio himilo November 15, 2017
Muqdisho – Weeraryahanka Manchester United, Romelu Lukaku ayaa ugu mahad-celiyey dhamaan saaxiibadiisa xulka Belgium oo ka caawiyey in uu jabiyo rikoorka ciyaaryahanka ugu goolasha badan xulkiisa – 31 gool ayuuna ku noqday kan ugu goolasha badan.
24- jirkan ayaa dhaliyey saddex gool labo kulan oo uu u ciyaaray bishan Red Devils, isaga oo goolka guusha dhaliyey daqiiqaddii 72aad kulankii ay la ciyareen Japan ee ka dhacay Bruges.
Lukaku ayaa haatan ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan xulka qarankiisa, isagoo raaciyay wadadii Paul van Himst iyo Bernard Voorhoof, waxaana uu si dhaqso ah ugu mahad celiyay kuwa ku dhow oo uu la matalo funaanadda xulka lagu naaneyso Red Devils.
“Waad mahadsan tihiin dhammaan ciyartoyda aan la ciyaaray ee Belgium,” ayuu ku soo daabacay Twitter-kiisa, dhamaantiin waad i caawiseen tan iyo markii aan ku soo biiray aniga oo 16-jir ah. Waxaan uga mahad-celinayaa qoyskeyga taageerada buuxda.”
Previous: Shaqo la’aanta – Musiibada ku dahsoon Bulshadeenna!
Next: Jan Vertonghen: ‘Diyaar baan u ahay kulanka darbiga ee Waqooyiga London’
Muqdisho: Dhallinyaro shaqo abuur ka helay makhaayad sameysa cunnooyinka dalka
Carwo shaqeynaysay 186 sano oo u xirmeysa dhaqaale la’aan
Cilmi baaris: Jeerta oo ogaan karta codadka